Dhagayso:Isgaarsiinta Ceelwaaq oo go,an Muddo todobaad ah iyo Xaalad deganaansho la,aan oo ka taagan degmadaasi | allsaaxo online
Dhagayso:Isgaarsiinta Ceelwaaq oo go,an Muddo todobaad ah iyo Xaalad deganaansho la,aan oo ka taagan degmadaasi
waxaa laga deyrinayaa xaalada amaan degmada Ceelwaaq ee Gobolka Gedo iyo deegaano badan oo hoos yimaada ,ka dib markii shaley degmadaasi fal la xariira aano qabiil gudaha degmadaasi loo diley labo nin oo ka mid ah Ganacsatada deegaano ku yaala xuduuda labada dal ee kenya.
Dadka dilkaasi geystey oo baxsadey ayaa goobjoogayaal ku sugan deegaano u dhow Ceelwaaq waxay VOS u xaqiijiyeen dilalkaasi inuu la xariiro dilka labo nin oo mid ka mid ah uu ka tirsanaa shaqaalaha Hormuud oo todobaad ka hor lagu diley tuulada biyo guur oo Ceelwaaq u jirta ilaa 15km,horey ayaa dilalkaasi loogu eedeyey Ciidamada Kenya,balse dadka dilka geystey ayaa qaba in dilkaasi ay ka dambeeyen Qabaa.ilka ay ka soo jeedaan Labada ruux ee la diley.
Mid ka mid ah Dadka deegaanka oo ka gaabsadey magaciisa kuna sugan Tuulada Cawsquran oo Ceelwaaq u jirta 35km ayaa sheegay in Ceelwaaq ay ka dhaceen shaley falal lagu diley labada ruux ee ganacsato ah,mana jiraan ayuu yiri Cid loo qabtey falalkaasi dilalka ah,waxaana sidoo kale uu sheegay muddo todobaad ah in ay go,an tahay Isgaarsiintii degmadaasi.
Dhinaca kalena waxaa uu sheegay in Saaka shil gaari oo ka dhacay inta u dhaxeysa deegaanka Geriley iyo tuulada Dhuyacgaroon oo ka tirsan Ceelwaaq in ay ku dhinteen ilaa labo ruux oo mid ay tahay dumar,halka ilaa 5 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen,ka dib markii ay isku dhaceen labo Baabur oo xamuul ah.
Halkaan Ka Dhagayso Waraysiga
Z0000159 - My Recording